Sabti, Jun 20, 2020-Laamaha amniga Puntland oo su’aalo weydiiyay weriyayaal wax ka qoray mudahaarad ka dhacay Bosaso – LaacibOnline
Sabti, Juun 20, 2020 (HOL) – Laamaha booliiska Puntland ayaa maanta u yeeray suxufiyiin ka holwgalla Puntland, kuwaas oo lagusoo eedeeyay inay buunbuuniyayeen mudaharaad maalintii shalay ka dhacay magaalada Bosaso ee xarunta gobolka Bari.Maxamed Saalax Muumin oo katirsan warbaahinta SBC, ayaa looga yeeray xarunta taliska booliiska gobolka Nugaal, kadib markii laamaha amnigu u sheegeen in lagasoo gudbiyay ashtako ku saabsan warbixin uu ka qoray mudaharaad ka dhacay Bosaso.
Laamaha booliiska saacado kadib ayay siidaayeen weriyahan kadib markii su’aalo laga weydiiyay qoraal uu ka qoray mudahaarad ka dhacay Bosaso.
Weriyaha oo lahadlay HOL, ayaa sheegay in uu laamaha booliiska ugudbiyay in warbixinta uu baahiyay ay ahayd xog ka hadlaysay waxa dhacay oo kaliya, balse aysan ku jirin buunbuunin iyo maran habaabin bulsho.
“Dad ayaa laamaha amniga iga dacweeyay oo doonayay in la xiro, balse taliyaha qeybta booliiska gobolka Nugaal markaan ugu tagay xafiiskiisa waxaan u sheegay warbixinta aan baahiyay iyo sawirraba in ay ahaayeen kuwa sax ah oo ka hadlayay mudaharaad ka dhacay Bosaso, waana shaqadayda weriyinimo. Taliyaha, runtii wuu ku qancay warbixintayda si wanaagsana wuu iila dhaqmay,” ayuu yidhi weriye Maxamed Saalax.
Wuxuu sheegay sheegay in arintaan aysan waxba ka bedelidoonin dhexdhexaadnimadiisa iyo wararka xaqiiqada ah ee uu kuu daabaco bartiisa Facebook oo ay boqolaal kun ku xidhan yihiin.
Dhinaca kale, taliyaha qeybta booliiska gobolka Nugaal G/sare Cabdiqaadir Jaamac Dirir oo la hadlay HOL, ayaa u sheegay in sababta ay ugu yeereen weriyaha ay tahay xaqiijinta eedeymo weriyaha loosoo jeediyay, balse markii uu wareystay uu ogaaday in weriyuhu aanu gelin wax qalad ah.
“Shalay waxaa la buun buuniyay mudaharaad ka dhacay Bosaso, weriyuhu wuxuu soo qoray ,” mudaharaad ayaa ka socda Bosaso iyo Sawir,”. Dad kale ayaa buunbuuniyay oo adeegsanayay sawirro hore,” ayuu yidhi Taliyaha.
Puntland ayaa mudahaarad ka dhacay Bosaso oo loogasoo horjeeday afar xaafaddood oo magaalada loo qeybiyay waxay sheegtay in la buunbuuniyay oo ay ku lug leeyihiin dad kasoo horjeeda amniga Bosaso waxayna sheegtay inay tallaabo ka qaadayso.
← Maradona oo Ka tagaya Mexico
Three Shabaab militants surrender in Belet Weyne →
Isniin, Aug 17, 2020-Afhayeenka ciiddanka booliiska Soomaaliya oo ka hadlay soo afjarida weerarkii hotel Elite
Jimco, July 24, 2020-Xaflad lagusoo dhoweynayay maareeyaha hay’adda duulista rayidka ah oo Muqdisho lagu qabtay
Published on March 4th, 2021 at 08:47pm EST Ontario held a new draw on March 3, inviting French-speaking Express Entry